Matambudziko 3 Ekutanga muIjipiti | Zvidzidzo zveBhaibheri Zvevana
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dayak Ngaju Dutch Edo Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Miskito Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Moore Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Matambudziko 3 Ekutanga
VaIsraeri vaimanikidzwa kuti vashande zvakaoma sevaranda. Jehovha akatuma Mozisi naAroni kunoudza Farao kuti: ‘Rega vanhu vangu vaende, kuti vanondinamata kurenje.’ Achizvikudza, Farao akapindura kuti: ‘Handina basa nekuti Jehovha ati chii, uye handisi kuzorega vaIsraeri vachienda.’ Farao akabva atovamanikidza kuti vashande zvakaoma kupfuura zvavaimboita. Jehovha aizodzidzisa Farao chidzidzo. Unoziva here kuti akazviita sei? Akaunza Matambudziko 10 panyika yeIjipiti. Jehovha akaudza Mozisi kuti: ‘Farao haasi kunditeerera. Mangwanani achange ari parwizi rwaNire. Enda kwaari umuudze kuti mvura yese yerwizi rwaNire ichachinja kuva ropa nekuti haana kurega vanhu vangu vachienda.’ Mozisi akateerera uye akabva aenda kuna Farao. Farao akaona Aroni achirova mvura yerwizi rwaNire netsvimbo yake, uye mvura yacho yakachinja kuva ropa. Mvura yerwizi rwacho yakabva yatanga kunhuwa, hove dzikafa, uye kwakanga kusisina mvura yakachena yekunwa kubva murwizi rwaNire. Asi Farao akarambazve kuti vaIsraeri vaende.
Papera mazuva 7, Jehovha akatumirazve Mozisi kuna Farao kuti amuudze kuti: ‘Ukarambidza vanhu vangu kuenda, Ijipiti ichazara nematatya.’ Farao haana kuteerera, saka Aroni akasimudza tsvimbo yake, matatya akatanga kuzara panyika yese. Vanhu vaiona matatya ari mudzimba dzavo, pavanorara, uye mumidziyo yavo. Matatya akanga akazara pese pese! Farao akaudza Mozisi kuti akumbire Jehovha kuti agumise dambudziko iri. Farao akavimbisa kuti aizosiya vaIsraeri vachienda. Saka Jehovha akamisa dambudziko racho, uye vaIjipiti vakaunganidza mirwi nemirwi yematatya akafa. Nyika yakatanga kunhuwa. Asi kunyange zvakadaro, Farao haana kurega vaIsraeri vachienda.
Jehovha akabva audza Mozisi kuti: ‘Aroni ngaarove pasi netsvimbo yake, uye guruva richabva rachinja kuita unyunyu, kana kuti tunhunzi tudiki tunoruma.’ Ipapo unyunyu hwakabva hwazara pese pese. Vamwe vanhu vemuIjipiti vakatoudza Farao kuti: ‘Dambudziko iri riri kubva kuna Mwari.’ Asi Farao akaramba kuti vaIsraeri vaende.
“Ndichaita kuti vazive simba rangu neukuru hwangu, Uye vachaziva kuti ndinonzi Jehovha.”​—Jeremiya 16:21
Mibvunzo: Ndeapi aiva matambudziko 3 ekutanga? Nei Jehovha akaita kuti pave nematambudziko aya?
Eksodho 5:1-18; 7:8–8:19; Nehemiya 9:9, 10
Matambudziko Matatu Okutanga Akawira vaIjipiti
Matambudziko 3 okutanga akanga akasiyana papi ne7 okupedzisira?
Kadhi reBhaibheri raAroni
Sei asina kubvumirwa kupinda muNyika Yakapikirwa?